Suma1L - ဝီကီပီးဒီးယား
Syed Sumail Hassan (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၉၉ တွင်မွေးဖွား) (حسن سمائل سید) သည် Suma1L ဟူသော ဂိမ်းနာမည်ဖြင့် လူသိများပြီး ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွား အမေရိကန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒိုတာ ၂ ကစားသမားဖြစ်ပြီး Evil Geniuses တွင်ကစားသည်။ Suma1L သည် EG အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး The International 2015 တွင် Clinton "Fear" Loomis, Kurtis "AUI_2000" Ling နှင့် Peter "ppd" Dager တို့နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲကစားခဲ့ပြီး အနိုင်ရခဲ့သည်။ သူ၏ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမှာ အသက်အရွယ်နှင့်ပင်မလိုက်ပေ။
၁ ကိုယ်ပိုင် ဘဝ
၂ မှတ်သားဖွယ် ပြိုင်ပွဲ ရလဒ်များ
မှတ်သားဖွယ် ပြိုင်ပွဲ ရလဒ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Kolker၊ Robert (July 30, 2015)။ THE VIDEO GAME DREAM: A PAKISTANI TEEN GETS RICH QUICK IN E-SPORTS။ December 18, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Khan၊ Farjad (February 9, 2015)။ 15-year-old Pakistani wins $1.2m Dota2 Asian Championship။ Lakson Group။ December 18, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pakistani teenager becomes youngest gamer to surpass $1million in eSports earnings as Dota2tournament sets major records။
↑ Throne of Games. E:60 (in English).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Suma1L&oldid=292192" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၁၂:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။